Mesut Ozil Oo Ka Hadlay Guushii Real Madrid Ee Xalay, Horyaalka Oo Uu Saadaaliyey Iyo Weeraryahanka Ugu Wanaagsan LaLiga Oo Uu Magacaabay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMesut Ozil Oo Ka Hadlay Guushii Real Madrid Ee Xalay, Horyaalka Oo Uu Saadaaliyey Iyo Weeraryahanka Ugu Wanaagsan LaLiga Oo Uu Magacaabay
Mesut Ozil Oo Ka Hadlay Guushii Real Madrid Ee Xalay, Horyaalka Oo Uu Saadaaliyey Iyo Weeraryahanka Ugu Wanaagsan LaLiga Oo Uu Magacaabay
Xiddiga Muslimka ah ee Mesut Ozil ayaa u dabbaal-degay guushii ay Real Madrid ka gaadhay Barcelona habeenkii xalay, waxaana uu saadaal ka bixiyey kooxda ugu cadcad hanashada horyaalka kaddib saddexda dhibcood ee ay Los Blancos ka heshay ciyaartaas.
Ozil oo khadka dhexe uga ciyaara kooxda reer Turkey ee Fenerbahce ayaa daawaday ciyaartii El Clasico ee Sabtidii, waxaana markii ay soo dhamaatay uu baraha bulshada ugu dabbaal-degay guusha ay Real Madrid gaadhay, taas oo keentay in ay hoggaanka horyaalka la wareegto.
Laacibka reer Germany oo sabbadjuu 2013kii ka tegay Real Madrid, una wareegay Arsenal ayaan qarsanin jacaylka iyo taageerada uu u hayo kooxdiisa hore ee Los Blancos, taas oo ay joogaan ciyaartooyo ay saaxiibtinimo dhow ka dhaxayso sida Karim Benzema iyo Marcelo.
Isaga oo adeegsanaya bartiisa bulshada ee Twitterka, Mesut Ozil ayaa yidhi: “Waxay ahayd ciyaar cajiib ah.”
Qoraalkiisa oo laba qaybood ka koobnaa ayuu sidoo kael ku yidhi: “Waa dhibco weyn oo Clasico ah. Real Madrid ayaa hadda ah kooxda ugu mudan hanashada horyaalka. #HalaMadrid”
Waxa kale oo uu Ozil amaan kula dul-dhacay Karim Benzema oo uu ku tilmaamay weeraryahanka ugu wanaagsan horyaalka LaLiga, iyadoo xiddiga reer France uu dhaliyey goolka koowaad ee ciyaartaas.
“Weeraryahanka ugu wanaagsan LaLiga wuxuu mar kale muujiyey heerkiisa – wiilkayga Benzi,”
The best striker of La Liga showed his class again – my boy Benzi 🔥😎💪🏼 Great 1st half #ElClasico @realmadrid @Benzema
Ozil ayaa Real Madrid u ciyaaray 159 kulan muddo saddex sannadood ah oo uu joogay oo u dhaxaysay 2010 illaa 2013kii, waxaana uu muddadaas dhaliyey 27 gool iyo 80 gool oo kale oo uu caawiye ka noqday.”